Dhimasho ka dhalatay fatahaad uu geysay Wabiga Shabeelle - Awdinle Online
Dhimasho ka dhalatay fatahaad uu geysay Wabiga Shabeelle
Wararka ka imaanayo Degmada jalalqasi ee Gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in Khasaaro nafeed uu ka dhashay fatahaad uu saacadihii la soo dhaafay degmadaasi ka sameeyay Wabiga Shabeelle.
Ugu yaraan Afar Qofood ayaa siiyaabo kala duwan Saacadahii ugu dambeeyay ugu geeriyooday Fatahada wabiga shabelle degmada jalalqasi ee Gobolka Hiiraan, sida ay sheegeen dadka degaanka.
Wararka ayaa sheegay in kaliga Dhaaymalaay ay ku dhaceen wiil iyo Gabar dadka degaanka kamid ahaay kadib markii ay doonyeen inay biyaha ka Gudbaan xili wabiga biyo xoogan u waday sido kale isla doox kalo wabiga u ka butaacay ayaa La soo soo wariyay in labo Caruur ah oo wiilal ah ay ku dhinteen.
Afarta Qofood dhintay ayaa dhamaantood ahaay dadka degmada jalalqasi ee Gobolka Hiiraan, wabiga shabelle ayaa Saacadahii ugu dambeeyay fataahada xoogan ka sameeyay Degmada jalalqasi iyo degaano hoosyimaado taasoo Sababtay khasaaro dhimasho ah.
Previous articleXOG: Madaxweyne Farmaajo oo xil culus u Magacaabay Salaad Cali Jeelle.
Next articleMuusi Biixi oo Amray in Cadaaladda la horkeeno dad kufsi & dil geystay